बालबालिकामा डिप्रेसनको जोखिम बढ्दै, जान्नुहोस् बच्चामा देखापर्ने डिप्रेसनको लक्षण | Safal Khabar
बालबालिकामा डिप्रेसनको जोखिम बढ्दै, जान्नुहोस् बच्चामा देखापर्ने डिप्रेसनको लक्षण
मंगलबार, ०४ फागुन २०७७, १२ : २८
काठमाडौं । जब बच्चालाई डिप्रेसनले गाँज्न थाल्छ, उनीहरुमा अस्वभाविक परिवर्तन देखिन थाल्छ । उनीहरु एकोहोरो हुने, जिद्दी गर्ने, कहिले खानामा मन नै नगर्ने, कहिले औधी खाने, कहिले एक्कसी रमाउने, कहिले रिसाउने, झर्कने गर्छन् ।
हामी के पनि ठान्छौं भने, यस्तो जटिल समस्या वयस्क एवं ठूलाहरुलाई मात्र हुन्छ । यो पनि गलत हो ।
चिन्ता बच्चालाई पनि हुन्छ । डिप्रेसनले उनीहरुलाई पनि गाँज्छ । अझ अहिलेको अवस्थामा बच्चाहरु यसको जोखिममा छन् । बच्चालाई किन डिप्रेसनले गाँजिरहेको छ त ? यसका एकमात्र कारण छैन । वर्तमान अवस्थामा एकल पारिवारिक संरचनादेखि विद्यालयको व्यवहारले समेत उनीहरुलाई यस किसिमको जोखिममा पारिरहेका छन् । पढाईको बोझ, अभिभावकको अपेक्षा अदि कारण बच्चाहरुमा डिप्रेसन देखिएको बताइन्छ ।
डिप्रेसन एक साइकोटिक डिसअर्डर हो । यसको प्रभाव के हुन्छ भने, बच्चा दुई हप्ता वा त्यो भन्दा बढी समय उदास रहन्छ ।
अक्सर आमाबुबाले आफ्नो बच्चलाई बुझेकै हुँदैनन् । बच्चाको रुची र क्षमताभन्दा पनि आफ्नो इच्छा उनीहरुमाथि लाद्ने गर्छन् । त्यही कारण बच्चामा मानसिक तनाव हुन्छ । चिन्ता हुन्छ । र, त्यसले डिप्रेसनको रुप लिन्छ ।
अतः बच्चामा डिप्रेसन हुनु बच्चाको कमजोरी वा गल्ती होइन । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई बढी दवाव दिने वा गाली गर्ने, कुट्ने व्यवहार एकदमै नराम्रो हो । बरु बच्चालाई कसरी डिप्रेसनबाट बाहिर ल्याउने भन्ने कुरामा आवश्यक तयारी चाहिन्छ । यसका लागि बच्चामा डिप्रेसन छ, छैन भन्ने कुरा निक्र्यौल गर्न जरुरी हुन्छ ।
– धेरै घरबराउनु ।
–विद्यालयमा अरुसँग घुलमिल नहुनु ।
बच्चालाई डिप्रेसन भएमा के गर्ने ?
बच्चा र अभिभावकवीचको सम्बन्धबाट नै यसको समधान खोजिन्छ । बच्चाको मनोविज्ञान अनुरुप अभिभावकले कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा यस अन्र्तगत पर्छ ।